အဆင့်မြင့်သောစာမျက်နှာကိုသင်အဆင့်မြှင့်တင်သင့်ပါသလား။ SEO ဒဏ္thာရီ | Martech Zone
သောကြာနေ့, မတ်လ 5, 2021 သောကြာနေ့, မတ်လ 5, 2021 Douglas Karr
သတ္တုတွင်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်ကသူတို့ဖောက်သည်အတွက်ဆိုဒ်အသစ်တစ်ခုဖြန့်ချိနေတဲ့ကျွန်တော့်ကိုဆက်သွယ်ပြီးအကြံဥာဏ်တောင်းတယ်။ သူကတစ် ဦး ဖော်ပြခဲ့သည် SEO အတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ခြင်းက၎င်းတို့အတွက်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောစာမျက်နှာများကိုမပြောင်းလဲစေရန်၎င်းတို့ကိုအကြံပေးခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကုန်အမှတ်တံဆိပ်အချို့သည်အော်ဂဲနစ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုအဓိကကျသောအလားအလာနှင့် ဦး ဆောင်မှုအဖြစ်ထည့်သွင်းထားသည့်အကြောင်းအရာမဟာဗျူဟာများပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ ဖြန့်ကျက်ခြင်းနှင့်တည်ဆောက်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်ကူညီခဲ့သည်။ ဖြစ်ရပ်တိုင်းတွင်၊ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအားလက်ရှိအဆင့်သတ်မှတ်ထားသောစာမျက်နှာများနှင့်ပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်ပိုကောင်းအောင်ကူညီခဲ့သည်။
ပေါင်းစည်း - ၎င်းတို့သည်ထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်များကြောင့်သုံးစွဲသူများသည်အကြောင်းအရာများတူညီသောအရည်အသွေးညံ့ဖျင်းသောစာမျက်နှာများကိုမကြာခဏရရှိလေ့ရှိသည်။ သူတို့က 12 သော့ချက်မေးခွန်းများကိုခဲ့လျှင်, ဥပမာခေါင်းစဉ်တစ်ခုအကြောင်း၊ သူတို့ဟာ blog post ၁၂ ခုရေးခဲ့တယ်။ အချို့ကအဆင်ပြေသည်၊ ငါစာမျက်နှာဒီဇိုင်းနှင့်အဓိကမေးခွန်းများကိုနှင့်အတူကောင်းစွာစနစ်တကျပြည့်စုံပြည့်စုံသောဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်အဖြစ်ကပိုကောင်းအောင်, ငါအားလုံးစာမျက်နှာများကိုအကောင်းဆုံးအဆင့်အရာ, အဟောင်းတွေဖယ်ရှားခြင်း, ရာထူးအတွက်စာမျက်နှာ skyrocket စောင့်ကြည့်ဖို့ redirect လိမ့်မယ်။ ဒီဟာကငါတစ်ခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူး။ ဖောက်သည်တွေအတွက်ငါအမြဲတမ်းလုပ်တယ်။ ငါတကယ်ဒီမှာပေါ်မှာလုပ်ပါ Martech Zoneလွန်း!
ဖွဲ့စည်းပုံ - သာလွန်ကောင်းမွန်သောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံအတွက်စာမျက်နှာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာစုစည်းနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်စာမျက်နှာပလပ်ဂင်များ၊ ခေါင်းစဉ်များ၊ SEO အတိုင်ပင်ခံအတော်များများကစာမျက်နှာပုံးတစ်ခုအဟောင်းကိုအသစ်တစ်ခုသို့ပြန်ပို့လိုက်ခြင်းအားတားဆီးလိမ့်မည် ၎င်း၏အခွင့်အာဏာအချို့ကိုဆုံးရှုံး ပြုပြင်မွမ်းမံသောအခါ။ တနည်းကား၊ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်အကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည့်အပြင်အသိဥာဏ်ရှိရှိဖြင့်ပြုလုပ်သည့်အခါတိုင်းအလုပ်လုပ်သည်။
အကြောင်းအရာ - visitors ည့်သည်များပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်သောပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိသော၊ နောက်ဆုံးပေါ်ဖော်ပြချက်များကိုဖော်ပြရန်ခေါင်းကြီးပိုင်းနှင့်အကြောင်းအရာများကိုကျွန်ုပ်လုံးဝအပြည့်အစုံပြန်ဆိုထားသည်။ စာမျက်နှာပေါ်ရှိစကားလုံးအရေအတွက်ကိုမကြာခဏလျှော့ချသည်။ မကြာခဏဆိုသလိုစကားလုံးအရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ အပိုဆောင်းကဏ္sectionsများကိုထည့်သွင်းခြင်း၊ ဂရပ်ဖစ်ထည့်ခြင်းနှင့်ဗွီဒီယိုကိုအကြောင်းအရာထဲထည့်ခြင်းများကိုမကြာခဏလုပ်သည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်စာမျက်နှာများမှပိုမိုကောင်းမွန်သောကလစ်နှိပ်သည့်နှုန်းကိုကြိုးစားမောင်းနှင်နိုင်ရန်အတွက်စာမျက်နှာများအတွက် meta ဖော်ပြချက်များကိုတစ်ချိန်လုံးစမ်းသပ်ပြီးအကောင်းဆုံးပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာ၌ငါမည်သို့ရေးသားခဲ့သည် SEO အခွင့်အလမ်းများကိုခွဲခြားသတ်မှတ် ရှာဖွေရေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တိုးတက်စေရန်နှင့်ငါဖော်ထုတ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည် အကြောင်းအရာစာကြည့်တိုက် အပိုဆောင်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်မောင်းထုတ်ရန်အလွန်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းအဖြစ်။ ငါသည်ငါ့ဆောင်းပါးအဘို့9အဆင့်။
ငါဆောင်းပါး၏အပြည့်အစုံဆန်းစစ်, ဆောင်းပါး၏ခေါင်းစဉ်ကို update, meta ခေါင်းစဉ်, meta ဖော်ပြချက်အချို့ updated အကြံပေးချက်များနှင့်စာရင်းဇယားနှင့်အတူဆောင်းပါးတိုးမြှင့်ကိုပြု၏။ ကျွန်ုပ်၏ပြိုင်ဘက်စာမျက်နှာအားလုံးပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးကျွန်ုပ်၏စာမျက်နှာကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာဖွဲ့စည်းထားခြင်း၊ နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ကောင်းစွာရေးသားခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
ရလဒ်? ငါဆောင်းပါးကနေပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည် 9rd အဆင့်မှ 3th အဆင့်!
ဒီ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုငါဖြစ်ခဲ့သည် စာမျက်နှာအမြင်နှစ်ဆရှိခဲ့သည် အော်ဂဲနစ်အသွားအလာမှယခင်အချိန်ကာလအတွင်း:
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာက ခဲ့ ဂိမ်း algorithms ကိုဖြစ်နိုင်ချေရှိပြီးသင်ဟာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်သင်အဆင့်ကိုဖျက်စီးနိုင်သည်။
ရှာဖွေမှုကိုဂူးဂဲလ်ကဆက်လက်လွှမ်းမိုးထားသည်မှာအဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့နှစ်ခုလုံးကိုဂရုတစိုက်လုပ်သည်။ ငါအကြောင်းအရာတွေကိုစာမျက်နှာများအတွက်ရည်ညွှန်းလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူကလူကြိုက်များအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်လိမ့်မည်ဟုလူတွေကိုငါမကြာခဏပြောပြပါ။ သင်နှစ် ဦး စလုံးပြုလျှင်, သင်သည်သင်၏ရာထူးတဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာသည်။
ဒီဇိုင်းများ၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ (သို့) ပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာများရပ်တန့်သွားခြင်းသည်ပြိုင်ဆိုင်နေသောဆိုဒ်များသည်ပိုမိုထိရောက်သောအကြောင်းအရာများနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံများကိုရရှိသောကြောင့်သင့်အဆင့်ကိုဆုံးရှုံးရန်သေချာသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ Algorithms သည်သင်၏သုံးစွဲသူများနှင့်သင့်စာမျက်နှာ၏လူကြိုက်များမှုလမ်းကြောင်းသို့အမြဲရွေ့သွားလိမ့်မည်။
ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် content နှင့် design optimization ကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရမည်ဟုဆိုလိုသည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်ဖောက်သည်များအားငှားရန်ငှားရမ်းထားသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အကြောင်းအရာ၏အရည်အသွေးနှင့် algorithms အပေါ်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံအပေါ်အမြဲအာရုံစူးစိုက်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များနှင့်စာမျက်နှာ SEO အတွက်အကောင်းဆုံးသောအလေ့အကျင့်များနှင့်အတူအနီရောင်ကော်ဇောကိုလှိမ့်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ် အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံတိုးတက်အောင် စာမျက်နှာများကိုကျော်ပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်အဆင့်အတန်းပျောက်ဆုံးခြင်းတို့နှင့်အတူအချိန်တိုင်း။
အကယ်၍ သင်သည် SEO အကြံပေးတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်သင်၏ဖောက်သည်များကိုအဆင့်မြင့်သောအကြောင်းအရာများကိုဘယ်တော့မှမပြောင်းရန်အကြံပေးသည်ဆိုပါစို့။ သင်၏တိုးတက်မှုရှိသောစီးပွားရေးရလဒ်များကိုမောင်းနှင်ရာတွင်သင်၏တာ ၀ န်သည်ပေါ့ပေါ့ဆဆရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ကုမ္ပဏီတိုင်းသည်သူတို့၏စာမျက်နှာပါအကြောင်းအရာများကိုခေတ်မီအောင်၊ သက်ဆိုင်ရာ၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိစေရန်နှင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံတိုးတက်စေရန်ပေးသင့်သည်။
သာလွန်ကောင်းမွန်သောအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောအလွန်ကောင်းသောအကြောင်းအရာသည်သင့်ကိုမကူညီနိုင်ပါ အဆင့်မြင့်တယ်ဒါလည်းဖြစ်လိမ့်မည် ပိုပြီးစကားဝိုင်းများကိုမောင်း။ ၎င်းသည်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့် SEO နည်းဗျူဟာများ၏အန္တိမရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။
Tags: အကြောင်းအရာ optimizationအကြောင်းအရာပိုကောင်းအောင်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောအကြောင်းအရာရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimizationseose ဒဏ္myာရီအကြောင်းအရာကိုအသစ်ပြောင်းခြင်း